Villa Ifigenia - I-Airbnb
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Ernesta
Le villa entsha ye-villa emangalisayo inikeza indlela yokuphila eyingqayizivele yokuzola nokuphumula.
Itholakala ebangeni lokuhamba ngezinyawo ukuya ePernera Resort Canter namanye amabhishi anesihlabathi amahle kakhulu.
I-villa inamagumbi okulala amathathu anosayizi omuhle (i-en-suite eyodwa) kanye nethala elimangalisayo lophahla.
Ifakwe ngokugcwele, le villa iyindawo ekahle yokujabulela yonke iminithi yeholide lakho.
Ukupaka Kwamahhala Kwangasese
I-Private Villa Complex